မှိုဟင်းချို၏အိမ်လုပ်အရည်ပျော်ရည်မုန့် - သငျသညျ Ree ရဲ့ Creamy မှိုဟင်းချိုကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်
ဝက်အူချောင်းနှင့်ပန်းသီးနှင့်အတူ Cornbread ဆေးထည့်
သငျသညျ Ree ရဲ့ Creamy မှိုဟင်းချိုကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်
ဒီဟင်းချိုကိုသင်ပုံမှန်အားဖြင့်စည်သွတ်ဗားရှင်းကိုသုံးသည့်နေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာ casseroles မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အရသာဖြည့်စွက်။ သို့မဟုတ်သင်က (စူပါ) မြန်ဆန်လွယ်ကူသောမုန့်ညက်အဘို့ဤအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့် (သို့) muffins နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ပါ။ Buttered Side Up မှ Erica Kastner မှ။ ကြော်ငြာ - အထွက်နှုန်းအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရန် -၃စားသုံးခြင်း ပြင်ဆင်ချိန် -0နာရီ၅မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -0နာရီဆယ့်ငါးမိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:0နာရီနှစ်ဆယ်မိနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၁/၄ ဂ။ ထောပတ် ၆ အောင်စ။ သေးငယ်သောကုန်တယ် ၁/၄ ဂ။ သေးငယ်သော Dice ကြက်သွန် ၁ minced ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့် အရသာအတွက်ဆားပြီးတော့ငရုတ်ကောင်း ၁/၄ ဂ။ All- ရည်ရွယ်ချက်မုန့် ၁/၂ ဂ။ Cream လေးလံသည် ၁/၂ ဂ။ ကြက်သားဟင်းရည်ဒီပစ္စည်းစျေးဝယ် module ကိုတတိယပါတီမှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဒီစာမျက်နှာကိုတင်သွင်းသည်။ သင်ဤအချက်အလက်များနှင့်အလားတူအကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်များအလယ်အလတ် - အပူနိမ့်ကျသည့်အခါတွင်အရည်ကိုအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။ မှိုများနှင့်ကြက်သွန်နီများနှင့်sautéကိုနူးညံ့သည့်အထိထည့်ပြီး ၈ မိနစ်ခန့်ထည့်ပါ။ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူအရသာမှရာသီ။
ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး2မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ။ မုန့်ညက်ကိုထည့်ပြီးနောက်ထပ်2မိနစ်ချက်ပြုတ်။ ချောမွေ့သည်အထိလျင်မြန်စွာမုန့်နှင့်ကြက်သားဟင်းရည်အတွက် whisk ။ 1 မိနစ်တစ်ဆူပွက်ဆူပွက်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ အပူမှဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လိုအပ်လျှင်ရာသီဥတုကိုမြည်းစမ်း။ ချိန်ညှိပါ normal ဤသည်မှာဟင်းချိုဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်ထက်ဆားငန်လိုသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကြက်သားဟင်းရည်၊ နို့၊ ရေသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်မှုစသည့် ၁ ခွက် ၁ ခွက်အရည်ကိုထည့်ပါ။
မှတ်ချက် - မှိုမှိုဟင်းချို၏ ၁၀ ၃ / ၄ အောင်စဘူး ၁ ခွက်ခန့်လေးသည်။ ဤစာရွက်သည်နို့ဆီဟင်းချို ၁/၂ ခွက်ဖြစ်သည်။
Gimme Some Oven မှအလီမှလှုံ့ဆော်သောစာရွက်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာအချို့ကိုဝယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လိုပဲနာပါတယ် အိမ်၌အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့်အခါထူးဆန်း။ အသံထွက်မ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုခုကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်မှားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကြံစည်သွပ်ရည်သည်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည် ရှိခဲ့တယ် ဝယ်ယူခံရဖို့။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အစားအစာများသည်အလွန်ကောင်းစွာပြုပြင်ထားသောကြောင့်အိမ်တွင်ပြန်ထုတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုအခါအချို့သူတို့သည်သူတို့မထိုက်တန်နိုင်အောင်လုပ်အား -intensive ဖြစ်ကြသည်။ MSG တွင်ပါဝင်သောဟင်းချိုတစ်ခွက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့ကိစ္စများအတွက် st jude
အချင်းလူတို့၊ ခွင့်ပြု, ကဘူးတစ်ဘူး၏အဖုံးကိုချွတ်ဆွဲထက်ပိုမိုအားထုတ်မှုယူပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အောင်နှင့်ပတ်သက်။ ကျေနပ်တစ်ခုခုပဲရှိပါတယ်။ Plus အား, သင်ကထဲသို့ဝင်သမျှကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်သင်လိုအပ်သောရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ မှိုများ၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်၊ မုန့်၊ ကြက်သားဟင်းရည်၊
ပထမဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအားလုံးကိုခုတ်ပစ်ပါ။ မှိုများကိုမျှမျှတတနည်းစေလိုသည်။ ငါသည်လည်းသူတို့ကိုအစားအစာပရိုဖိုင်းကိုသုံးပြီးသူတို့ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အရသာအတွက်သူတို့ကိုသိပ်နည်းလွန်းစေတယ်။
တစ် ဦး skillet အတွက်ထောပတ်အရည်ပျော်။
မှိုများနှင့်ကြက်သွန်နီထည့်ပါ။ နူးညံ့သည်အထိSautéခန့် 8 မိနစ်။
ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး2မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ။
မုန့်ညက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်2မိနစ်ချက်ပြုတ်။
ကောင်းမွန်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့အထိသည်အထိမုန့်နှင့်ကြက်သားဟင်းရည်ကိုမြန်မြန်ခုတ်ပါ။ 1 မိနစ်တစ်ဆူပွက်ဆူပွက်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ အပူထဲကနေဖယ်ရှားအနည်းငယ်အေးရန်ခွင့်ပြုပါ။
ဒီဟင်းချိုကိုသင်ပုံမှန်အားဖြင့်စည်သွတ်ဗားရှင်းကိုသုံးသည့်နေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာ casseroles မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အရသာဖြည့်စွက်။ သို့မဟုတ်သင်က (စူပါ) မြန်ဆန်လွယ်ကူသောမုန့်ညက်အဘို့ဤအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်, သင်ညစာစားရရှိပါသည်!
ဤသော့ Lime Pie Cheesecake Bars သည်ထိခိုက်လိမ့်မည်
This Creamy Butternut Squash Mac နှင့်ဒိန်ခဲကိုစမ်းကြည့်ပါ
ဘလူးဘယ်ရီသံပုရာ Sweet Rolls
အမေရိကန်သမိုင်းစာဖတ်သူများ - ရမှတ်!
Ree နှင့် Ladd သေချာပေါက်အတူတူချစ်စရာဖြစ်ကြ၏
ဤဖရဲသီး - Raspberry Sangria သည်လန်းဆန်းစေသည်
ဒီနွေရာသီမှာအေးခဲ Lemonade နှင့်အတူအေး
Pineapple ဇောက်ထိုးမီးဖိုချောင် + ဇွန်လတွင်ချက်ပြုတ်သောတနင်္ဂနွေ!
spaghetti sauce မှာထည့်စရာတွေ
ခရစ္စမတ်အတွက် မင်းရဲ့အဖေကို ဘာရနိုင်မလဲ။
novena မှ st clare of assisi